सुन तस्करीका ६ रहस्य | Nagarik News - Nepal Republic Media
३० वैशाख २०७५ १३ मिनेट पाठ
काठमाडौं- दुबई हुँदै हवाईमार्गबाट नेपाल आएर त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत विमान कम्पनीका सहयोगीमार्फत् बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन र त्यसको जालो दुई महिनायता नेपालमा चर्चाको शिखरमा छ। नेपालमा सुन तस्करी नौलो घटना हुन छाडेको धेरै भइसकेको छ। प्रहरी अधिकारी र भन्सारका कर्मचारी जोडिनु पनि नौलो घटना थिएन। विमानस्थलमा आवतजावत गर्ने हवाई कम्पनीका कामदार, तस्कर र सुरक्षा निकायका अधिकारीको त्रिपक्षीय जालो भने यस पटक उदेकलाग्ने गरी उदांगियो।
सुन तस्करीसँग जोडिएर भएको सनम शाक्यको हत्याको अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने र फिल्डमा खटिने अधिकारीलाई समेत अभियुक्त बनाउँदै मुद्दा दायर हुँदा आश्चर्य र आशंकाको तह ह्वात्तै बढ्यो। सुन तस्करीका पटके अभियुक्त, कहलिएका सुन व्यापारीदेखि राजनीतिज्ञसमेत गरी ६३ जनाको नाम सहितको अभियोग पत्र दर्ता भएपछि अहिले मोरङ जिल्ला अदालतमा बयान सकिएर थुनछेकको क्रम जारी छ।
कहिलेदेखि सुन तस्करी हुन थालेको हो ? कति परिणामसम्म तस्करी भयो । तस्करीमा कसको संलग्नता कति हो भन्ने सबै खोतलखातल भए पनि तस्करी भएर नेपाल भित्रिएको सुन कसको थियो ? यी प्रश्नमा अभियोग पत्र मौन छ। राप्रपाका नेता समेत रहेका भुजुङ गुरुङले बयानमा मोहनकुमार अग्रवालको लगानीमा बैंककबाट थाई एयरलाइन्स हुँदै सुन त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौंसम्म ल्याएको उल्लेख छ।
दुई महिना लगाएर गरिएको अनुसन्धानमा सुन लुटिएको हो या हैन समेत खुलाउन सकेको छैन। पक्राउ परेका अभियुक्तहरुले समेत सुन लुटिएको थियो या थिएन खुलाएका छैनन् । सबैको बयानमा विमानस्थलबाट सुन बाहिर निकालेर अनामनगरमा रहेको सुन गोदाममा सानु बनले लैजानेक्रममा सुन लुटिएको भनेको सुनेको मात्र उल्लेख छ ।
अभियोग पत्रमा उल्लेख भएअनुसार रजिस्टरमा कसैको नाम उल्लेख छैन । रकम दिएको व्यक्तिको नाम डिआइजी मामा, एसएसपी मामा, एसपी मामा, डिएसपी मामा र एसएसपी मायाको ड्राइभर उल्लेख छ । रजिस्टरमा रहेको कोड नेम कसको हो भन्ने एसएसपी खत्रीको चालकसमेत रहेका खड्काले बयानमा डिआइजी मामा भन्ने व्यक्ति निरौला, एसएसपी मामा भनेको खत्री, एसपी मामा भनेको खनाल सर र डिएसपी मामा भनेको राउत रहेको खुलाएका छन्।
अनुसन्धान समितीसँगको बयानमा कोड नेम खुलाएका खड्काले अदालतको बयानमा यी कसैलाइ नचिन्ने र प्रहरीले थर्काएर बयान दिन लगाएको भन्दै बयान फेरी सकेका छन्।
जुन समयमा साढे ३३ किलो सुन तस्करी भएर विमानस्थलबाट बाहिरियो यी कुनै पनि प्रहरी अधिकारी विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारीमा थिएनन् । उनीहरु कार्यरत रहेको समयमा विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीबारे अभियोग पत्रमा केही उल्लेख छैन।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ १७:१८ आइतबार